MaZulu vanoti phengu (ideophone of turning over. reversing, changing).
MaZulu] vanoti phenguka (v.intr. Turn over, change; become reversed.).
MaZulu] vanoti phengula (v.tr. Turn over, reverse; change; controvert.).
MaZulu] vanoti phengulula (v. Turn right over; absolutely reverse; change entirely).
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Rupinguro_rweMishonga&oldid=76452"
Last edited on 25 Chikunguru 2020, at 15:13
This page was last edited on 25 Chikunguru 2020, at 15:13.